Trinidad sy Tobago hampiantrano ny festival zavakanto lehibe indrindra any Karaiba
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Trinidad sy Tobago hampiantrano ny festival zavakanto lehibe indrindra any Karaiba
Hatao any Trinidad sy Tobago manomboka amin'ny 16 Aogositra ny festival ara-javakanto sy kolontsaina lehibe indrindra any Karaibath ho 25th. Ny Festival Festival of the Arts (CARIFESTA) any Karaiba dia ao anatin'ny faha-efatra ambin'ny folo taonany ary naharitra roapolo taona lasa izay satria ny andraikitra amin'ny fampisehoana ny festival dia nivezivezy tany amin'ireo nosy samihafa ao amin'ny faritra.
Nandritra ny taona maro lasa, ny CARIFESTA dia mpiorina amin'ny tsy fanamafisana ny fampidirana faritra any amin'ireo firenena Karaiba, mpanao asa tanana ary mpanao kolontsaina. Ity fetibe midadasika ity noho izany dia nanjary fanombohana an'i Karaiba handray ny sehatra afovoany, amin'ny alàlan'ny fitondrana ny votoatin'ny zavatra mampanan-karena ny nosy eo amin'izao tontolo izao.
Amin'ny 2019, ny lohahevitry ny festival dia "Connect, Share, Invest", ary izany dia manasongadina ny tanjona faratampony any Karaiba amin'ny ankapobeny, dia ny fampiraisana ny faritra. Amin'ny maha-mpampiantrano an'ity taona ity, i Trinidad sy Tobago dia hanamafy ny satan'ny maha-Mekeka azy amin'ny sehatry ny famoronana any Karaiba satria nantsoina ho renivohitry ny kolontsaina ao amin'ireo faritra ireo nosy roa. Ireo nosy dia fonenan'i Carnival, “fampisehoana lehibe indrindra eto an-tany”, ary misy fientanam-po be satria ny tanjona dia ny fampirantiana sy hivarotana ny kolontsaina Trinidad sy Tobago mankany amin'ny faritr'i Karaiba sy ny sisa eran'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny CARIFESTA XIV.
Hatreto dia firenena 21 no nisoratra anarana ho an'ny CARIFESTA XIV satria misy ny fientanam-po momba ny fahafahan'ny kolontsain'izy ireo hizara amin'ny toerana mamorona mamorona. Raha mikasa ny ho tonga amin'ny CARIFESTA XIV any Trinidad sy Tobago ianao, dia mijere fety mamorona amin'ny fanehoana ny mozika, dihy, teatra, sarimihetsika, zavakanto an-tsary, zavakanto haitao, haitao, Folklore ary Craft. Mandritra ny folo (10) andro dia afaka milentika any Trinidad sy Tobago ianao ary manana traikefa ara-javakanto sy kolontsaina izay tsy eto amin'ity tontolo ity.
Ny tena manintona na foibeny dia ny Festival Village ao amin'ny Queen's Park Savannah any Port of Spain miaraka amina hetsika satelita hita amina toerana famoronana maro hafa eto an-drenivohitra sy manodidina. Ny hetsi-dehibe ataonay dia ny Island Beats Super Concert izay mampiseho fampisehoana avy amin'ny hetsika iraisam-pirenena toy ny Grammy Award Winning Artist Shaggy, French Caribbean Zouk band Kassav, Soca Super Star Machel Montano ary ny Queen of Soca Calypso Rose.
Raha mila fanazavana fanampiny, midira ao carifesta.net ary tandremo sao ho avy tsy ho ela ny fampiharana CARIFESTA XIV izay ho hita ho an'ny fitaovana Android sy iOS.
Irlandy: fihenan'ny fitomboan'ny fahatongavan'ireo iraisam-pirenena manomboka amin'ny taona 2018 ka hatramin'ny 2022
Holland America's Westerdam dia mijery firenena Azia valo amin'ny vanim-potoana 2019-20